Inkampani show - TXJ International Co., Ltd.
Zonke ihlanganisa indawo ka 30,000 square metres, okubandakanya ukukhiqiza workshop, ukuhlolwa isikhungo futhi isitoreji isikhungo. isethi egcwele eziphambili imishini ezishintshayo njengoba kungabantu abangaphezulu kuka-120 yokusebenza isisebenzi kanye 5 professional izinga nabahloli banesibopho lomkhiqizo. Packaging workshop ihlanganisa indawo 2,000 ayi skwele, abasebenzi 20 izolandela ikhodi nokupakisha.
Kukhona abasebenzi 20 nokuphatha isikhungo lapho ifakwe ngokuzenzakalela ishede ukuphathwa uhlelo sezihambile ukupholisa control lokushisa imishini 4,000 square metres Logistics, futhi ube ngomshini ukuvunwa umthamo
Ihhovisi ukwakha igumbi embukisweni ihlanganisa indawo 500 square metres, 10 onjiniyela nabaqambi ingabe banikezela phezu kwamakhulu imiklamo emisha njalo ngonyaka. Unyaka ngamunye, kukhona ukuklama umkhiqizo ikhathalogi entsha for VIP custmers.We ayajabula ukwamukela ODM noma OEM oda lakho.